Creative Writing » ရုပ်ရှင် ရိုက်ကြမယ်လေ….. :P	52
Kaung Kin Pyar says: ပြန်လာခဲ့ပါနော်….
အလင်းဆက် says: ဟဲ့ပလောက်တောက်
Kaung Kin Pyar says: ဒါတောင် အလက်ဆင်း ခင်ဖွေးကို တ ပြီး သေသွားတဲ့အခန်း မထည့်ထားဘူး….
အလင်းဆက် says: ခင်နဲ့ ဖွေးကို ရောမပစ်ပါနဲ့ဂျာ… စိတ်ညစ်ထှာ…
Kaung Kin Pyar says: သိကြားကို ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့မတူအောင် လုပ်ဖို့ကတော့ မိတ်ကပ်ဖိုး အတော်ကုန်မယ်ထင်ပါရဲ့ကွယ်…။
အလင်းဆက် says: ဟွာလေ…Bank အကောင့် နံပါတ်လေး..ပေးထားလေ…
Kaung Kin Pyar says: ရော့…ဘဏ်အကောင့်နံပါတ် အရင်ယူထား….တစ်ကျပ်က နည်းတယ်လေ..၊ ရှာရခက်ပါဘိသနဲ့….၊ တစ်သောင်းလောက်ကဖြစ်ဖြစ် စ ထည့်လဲ စိတ်မဆိုးဘူးရယ်…။
Yae Myae Tha Ninn says: အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ရောက်လာတာက…ကိုထွဋ်….။ အကြောင်းက ဂျပန်တွေဖွက်ထားတဲ့ ရတနာသေတ္တာကြီး သူမြင်ခဲ့တယ်…၊ အတော်ကြီးလေတော့ လေးတယ်..၊ သူမသယ်နိုင်ဘူးလေ…။ ရရင် ခွဲယူကြမယ်ပေါ့…၊ သူလဲ စုရဆောင်းရဦးမယ်…၊ ကလေးကလဲ မွေးဦးမှာကိုး….(ကိုထွဋ်မိန်းမက ပြောပါတယ်….)
Kaung Kin Pyar says: သြော်….သိဘာဒယ် သိဘာဒယ်…။ မယ်သီလရှင်တွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီး ဖြစ်ပျက်ရှုတော့မယ် ဆိုတာကို..
အဲဒါလာပြောတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အယ်…သဂျီးပေါ်လာမှ…သဂျီးမင်း ကျန်ခဲ့တယ် ကျန်းးးးးး
Mr. MarGa says: ဘယ်မလဲ သရုပ်ဆောင်ခ
အလင်းဆက် says: .ဒေါ်ဖွားမေဆိုတာ… မန်းလေးမှာနေတဲ့ ညိုစိမ့်စိမ့်အသားအရည်နဲ့ဆိုတာရော..သတင်းရပ်ကွက်က..မပြောလိုက်ဖူးလား.. သဂျွဲ
Kaung Kin Pyar says: အချစ်စမ်းဂျပြန်ဘီ….သူရို့၂ယောက်က …နာပြောရင်လဲ နာပြောကြီး ဖြစ်အူးမယ်….
Kaung Kin Pyar says: ဒါကတော့…လင်မယားလို ဂျစ်သူတွေက ပိုသိပါလိမ့်မယ်….ထင်ဘာရဲ့…
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟမ်း… ဟင်းချက်နည်း မစရတဲ့အတွက် ရှယ်ယာခွဲပေးပါ…
Kaung Kin Pyar says: သြော်….ဒါကတော့…ဦးကျောက်စ်က ရွာလူကြီးမဟုတ်လား….။ တတ်သည့်ပညာမနေသာဆိုသလို…ပညာအမွေ ခွဲဝေတယ်လို့ သဘောထားပြီး…ရှယ်ယာကိစ္စလေး လျှော်လိုက်ပါညှော်….ညှော်…
ခင်ဇော် says: ထနဂယေးးး
Wow says: ဟုတ်လယ် ဟုတ်လယ် ရဒနာသစ်တာဂို ဒီအတိုင်းတော့ မထားခဲ့ဝူး မျက်မမြင်မောင်လေးဂိုနေရာချပီးမှ လက်ဖွဲ့ပေးခဲ့မာ…
နောက်ပီး ယောဂီဝတ်စုံဒီဇိုင်းစုံကို ဗစ်တိုးရီးယားဗက်ခန်းကို ဆွဲခိုင်းအူးမာ ရီလိုက်ရတာ ကင်းကောင်လေးရယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဟင်…ဒါဆို…ယောဂီဝတ်ဖို့က အချိန်ကြာဦးမှာပေါ့နော်…
ဖားသက်ပြင်း says: ​နောက်​တကားကျရင်​ ကရင်​သဗုံ​တွေကို အဘ ​အောင်​ဆန်းသူရိယဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး ဖားသက်​ပြင်းက ပက်​ပက်​စက်​စက်​​ခြေမှုန်းတဲ့အ​ကြောင်း ဆက်​ရိုက်​ပါ
Yae Myae Tha Ninn says: တိုကြီးဖား.. အောင်ဆန်းသူရိယ ဘွဲ့ ရသူ တော်တော်များများက ရှောပြီးမှ ရသလားလို့… :P
Kaung Kin Pyar says: သိဒရယ်လေ….
Kaung Kin Pyar says: .ကရင်​သဗုံ​တွေကို အဘ ​အောင်​ဆန်းသူရိယဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး ဖားသက်​ပြင်းက ပက်​ပက်​စက်​.စက်​​ခြေမှုန်းတဲ့အ​ကြောင်း မရိုက်ခင်…
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says: ဖားဆိုတာ သတ်​စားစရာမဟုတ်​
Mike says: .တကယ်က ကိုထွဋ်မသွားတာ ရတနာသေတ္တာ ပုံစံတူ အတုဂျီးဗျ…ဂျာပွန်တွေအတုနောက်လိုက်နေတုန်း
.ကောင်းကင်ပြာကိုလည်းဒီတစ်ခါတွေ့ရင်ပေးမယ်နော်..ပူနဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ငင်?
weiwei says: အမြည်းကို​တော့ ကြိုက်​သွားပြီ ။။။
Kaung Kin Pyar says: မဝေတစ်ယောက်တော့ ရဘီ…ဟေးးးးးးးးး
Kaung Kin Pyar says: .ငွင့်…..
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟမလေးရီလိုက်ရတာ။ အူကျောင်အခန်းကအရီရဆုံးပဲ။ ရတနာသေတ္တာက ဘက်နဲ့ မိုက်ဆီမှာသေချာရင်တော့ ဒီတခါဘက်ကိုပြန်ဘေးဆွဲထားလိုက်အူးမယ်
Kaung Kin Pyar says: .လုပ်ပလိုက်…မွသဲ…လုပ်ပလိုက်…
ရွှေတိုက်စိုး says: အော် ဦးကြောင်ဦးကြောင် အခုတော့ သွားရှဘြီပေါ့.. အမမမမမမလေးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Kaung Kin Pyar says: လူလုပ်ကောင်းတဲ့အရွယ်လေးးးးးးးးးးးးးးးးး အရီးးးးးးးဟီးဟီးးးးးး
Ma Ma says: ဂျပန်လက်နက်ကြီးနဲု့ထုလို့ သေပြီလို့ ထင်ပြီး ပစ်ထားခဲ့တဲ့ ဦးကြောင်က မသေ။
Kaung Kin Pyar says: .ဟုတ်တယ်…
.(အိုက်ဒိအခန်းကို ထပ်တိုးအနေနဲ့ လာရမှာ….. ) ကျန်ခဲ့တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: ဒရိုက်ဘာကြီး အဲ ဟုတ်ပေါင် ဒါရိုက်တာကြီး ဇာတ်လိုက်ကျော် ကြောင်မင်းသားကို စောစောစီးစီး သတ်ပလိုက်ရတာလဲ ဇာတ်ရှိန်လေးကောင်းတုန်း ဆက်ဆွဲခေါ်မှပေါ့ဟ။
Kaung Kin Pyar says: အူးကြောင်ကို စောစောစီးစီး အနားပေးလိုက်တာက အကြောင်းရှိတယ် လေးခရဲ့…
Novy says: အသေမသတ်ဘဲ လက်တွေဖြတ်လိုက် မျက်လုံးတွေကန်ပစ်လိုက်
Novy says: ဒါပေမယ့်…ကံဆိုးစွာပဲ…နောက်ဆုံးပစ်လိုက်တဲ့ အမြှောက်ဆံဟာ အူးကြောင်နောက်ကျောဘက်လောက်ကို တည့်တည့်ကြီး ကျတယ်….။ အူးကြောင် လွင့်သွားတယ်….လွင့်သွားတယ်…လွင့်သွားတယ်..။ (၇)ပေအကွာလောက်အထိကို လွင့်သွားတာ…။
အလင်းဆက် says: .နောက်ဆုံး အူးကျောင် လျှောခါနီးအချိန်မှာ..အကြော်စုံရောင်းဖို့ထွက်လာတဲ့ ဒေါ်ဖွားမေက… တစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေရသူကြီး..သေပြီတော့်…ဆိုပြီး..ဖက်ငိုတဲ့အခန်း…
အဲဒလိုလေးဆို ပိုမကောင်းလား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဟီးဟီးဟီးးးး
Ko chogyi says: ဦးကြောင်ကို လက်သဲခွာခန်း
Kaung Kin Pyar says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: ကင်းကောင်နဲ့ ကားပြာဒဂါး ရိုက်ချင်လိုက်တာ…။ သဒံလှုပ် တရုတ်တူ လျှာထွက်အောင် အားဂျိုးမှံတက် သရုပ်ဆောင်ဦးမှာ…
Kaung Kin Pyar says: ကင်းကောင်လား…? ပြောပေးမဲ… ဖိုးဖြူတို့ဘာတို့ရော….လိုသေးလား…အူးကြောင်….
အာဂ says: အပိုင်း ၂ ။ ။ ရတနာသေတ္တာတစ်လုံးနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကောင်းကင်ပြာအား..။ ဂျပွန်အလိုတော်ရိ များဖစ်ကြတဲ့ မစ္စတာကမ်း တို့က လိုက်လံရှာဖွေ။ အဲမှာ ဘီအိုင်အေ က တော်လှန်ရေး မင်းသား ဓားအာဂ က လိုက်လံကယ်တင် ရင်း….။ ဂျပွန်တွေလိုက်လို့အပြေး ချုံ ပုတ်တစ်ခုမှ အတူတူပုန်းနေတုန်း ..(ကြော်ငြာ ၁၀ခု ၀င်) ဂျပွန်အလိုတော်ရိနဲ့ ဂျပွန် တစ်သိုက် ခြုံပုတ်ဘေးနား ဖြတ်အလျောက် ကောင်းကင်ပြာ အားတွေ့သွားမည် စိုးလို့ မင်းသား အာဂ ကောင်းကင်ပြာ ပါးစပ်အား လက်နှင့် ပိတ်လိုက်ကာ (ကြော်ငြာ ၁၅ခုဝင်) တိုးတိုးတိတ်တိတ်နေရန်ပြော။ သို့သော် အဲဒီမှာ ကြေကွဲခန်းစ အလွမ်းဇာတ်လေးပေါ့နော်။ မင်းသမီးကလည်း မျက်လုံးလေးပြုးပြီး ခေါင်းလေးခါခါနဲ့ အူးအူး အူး အဲး အဲ(ပါးစပ်ပိတ်ထားသောကြောင့်) ပြော ဓားအာဂကလည်း အသံထွက်မှာဆိုးလို့ ပါးစပ်ကို ပိုတင်းတင်းပိတ်။
Kaung Kin Pyar says: တွေ့မယ် တွေ့မယ်
အာဂ says: ခိခိ…..ခိခိ……လုပ်လိုက်ရေ ကြာရားလို့…။
မြစပဲရိုး says: ဒီမှာလဲ နောက် ဟာသ တစ်ပုဒ်။
ရာမည says: ဦးကြောင်ကြီးရေ့
သာဓုသာဓု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.